Ngwe Yi Pale Group of Companies
NGWE YI PA LE' GROUP OF COMPANIES
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှတ်ပုံတင်အမှတ် (၁၅၇၀၀၄၉၅၆) ဖြင့် (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ ၃ရက်)နေ့တွင်ငွေရည်ပုလဲကုမ္ပဏီအုပ်စုကိုစတင်ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများအားဦးဆောင်ပြီး အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ပါသည်။ စုစုပေါင်း ဝန်ထမ်းအင်အား (ဘိလပ်မြေစက်ရုံများ၊သကြားစက်ရုံများ၊သတ္တုမိုင်းများနှင့်အရောင်းဌာန၊စီမံဌာန၊လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန၊စာရင်းဌာန)(၃၀၃၀)ဦးဖြင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် သော နိုင်ငံတော်သစ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ရာတွင် အဓိကအခြေခံ အုတ်မြစ် ဖြစ်သည့် CROWN အမှတ်တံဆိပ်ဘိလပ်မြေနှင့် White Sugar ကိုကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် SINN SHWE LI အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် ဒေသအလိုက် စားသုံးသူများထံသို့ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျှက်ရှိပါသည်။ ငွေရည်ပုလဲအုပ်စုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်များအားယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေးရခြင်းအတွက်များစွာဂုဏ်ယူမိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ငွေရည်ပုလဲကုမ္ပဏီအုပ်စုမှခေတ်မီနည်းပညာများကိုအသုံးပြုပြီးအရည် အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များအားထုတ်လုပ်၍ သုံးစွဲသူများအပေါ်တွင် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် အစဉ်အမြဲကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
CEMENT Co., Ltd.
ငွေရည်ပုလဲ ဘိလပ်မြေ ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှတ်ပုံတင်အမှတ် (၁၃၀၇၉၉၀၂၇) ဖြင့် (၂၀၁၄ခုနှစ်၊မတ်လ၊ ၃ရက်) နေ့တွင်စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်၊နောင်ချိုမြို့နယ်၊လောက်ဖန်းကျေးရွာအနီးတွင်တစ်နေ့တန်(၁၀၀၀) အနည်းဆုံးထုတ်လုပ် နိုင်သော Crown အမှတ်တံဆိပ်ဘိလပ်မြေစက်ရုံကိုမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကော်မရှင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် (၂၀၁၃ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာလ၊၁ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး 42.5 Class နှင့် 52.5 Class အမျိုးစားနှစ်မျိုးကို Dry Process နည်းစဉ်သုံး၊ ငါးဆင့်ကြိုတင်အပူပေးစနစ်ဖြင့် စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်လျှက်ရှိပါသည်။
စက်ရုံအတွက်လိုအပ်သော လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို ဒီဇယ်ဂျင်နေတာစက်ကြီးများ ခုတ်မောင်း၍ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လည်ပတ်သုံးစွဲလျှက်ရှိပါသည်။ ကြံရာသီသကြားစက်ရုံလည်ပတ်ချိန်တွင် ဆင်းရွှေလီသကြားစက်ရုံအမှတ် (၂) အင်းဝိုင်းမှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား (15 MW) သွယ်ယူသုံးစွဲပါသည်။ ယနေ့အချိန်တွင် ဒုတိယအဆင့်တစ်နေ့တန် (၄၀၀၀)ကျ အမှတ် (၂)လိုင်းကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆၈.၅၀)သန်း အပါအဝင်ကျပ်(၉၄၁၇၀.၁၃)သန်းတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခွင့်တင်ပြခဲ့ခြင်းအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိခဲ့ပြီး (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၁ရက်) နေ့တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ တည်ဆောက်မှုပြီးစီး၍ လည်ပတ်ထုတ်လုပ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်နှစ်ဆန်းပိုင်းမှ စတင်ပြီး မိမိစက်ရုံထုတ် Crown ဘိလပ်မြေဖြင့် ကျောက်၊ သဲ၊ ကုန်ကြမ်းများအား သတ်မှတ်စံနှုန်းနှင့်အညီ ဖျော်စပ်ထုတ်လုပ်သည့် အသင့်ဖျော်ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်းကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ စက်မှု (၁) ပန်းခြံလမ်း၊ ၆၂လမ်း၊ အမှတ် (F-1) တွင်တိုးချဲ့တည်ထောင်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအား ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပါသည်။
SINN SHWE LI SUGAR Co., Ltd
ငွေရည်ပုလဲ သကြားကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှတ်ပုံတင်အမှတ် (၁၅၅၇၆၉၁၁၄)ဖြင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ရှမ်းပြည်နယ်၊နောင်ချိုမြို့နယ်၊ဆမ္မဆယ်ကျေးရွာ အုပ်စုတွင်တစ်နေ့ကြံတန်ချိန် (၁၀၀၀) ကြိတ်ဝါးသည့်ဆင်းရွှေလီသကြားစက်ရုံကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကော်မရှင်ခွင့်ပြုမိန့်အမှတ် မနသ-၆၈၆/၂၀၀၈ ဖြင့်၂၀၀၈ခုနှစ်၊ဧပြီလ၊၂၄ရက်နေ့တွင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ခုနှစ်၊မေလ၅ရက်နေ့မှစတင် ၍ သကြားဖြူ (White Sugar) ကိုစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်လျှက်ရှိပါသည်။ ကြံရာသီတွင် စက်ရုံမှဘေးထွက်ပစ္စည်းဖြစ်သောကြံကြိတ်ဖတ်လောင်စာဖြင့် (1.5MW) တာဘိုင်(၂)လုံး အသုံးပြုပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား(3 MW) ထုတ်လုပ်သုံးစွဲပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် ၊နောင်ချိုမြို့နယ် ၊အင်းဝိုင်းကျေးရွာတွင် တစ်နေ့ကြံတန်ချိန် (၄၀၀၀) ကြိတ်ဝါးသည့်ဆင်းရွှေလီသကြားစက်ရုံကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကော်မရှင်ခွင့်ပြုမိန့်အမှတ် မနသ-၉၃၅/၂၀၁၃ဖြင့်၂၀၁၃ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာလ၊၁၆ရက်နေ့တွင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိတည် ထောင် ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ခုနှစ် ၊ဧပြီလ ၁ရက်နေ့မှစတင်၍သကြားဖြူ (White-Sugar) ကိုစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်လျှက်ရှိပါသည်။ ကြံရာသီတွင်စက်ရုံမှဘေးထွက်ပစ္စည်းဖြစ်သော ကြံကြိတ်ဖတ်လောင်စာဖြင့် (18 MW) နှင့် တာဘိုင် (၂)လုံး အသုံးပြုပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား (30 MW) ထုတ်လုပ်ပြီး 33 KV ဓာတ်အားလိုင်းဖြင့် CROWN ဘိလပ်မြေစက်ရုံသို့ ဓာတ်အား (15 MW) ပို့လွှတ်ပေးပါသည်။ သကြားစက်ရုံများအတွင်း လေဝင်လေထွက် ကောင်းမွန်စေရန်အလင်းရောင်ကောင်းမွန်စွာရရှိစေရန်စီစဉ်ထားသည့်အပြင်ဝန်ထမ်းအားလုံးကို နှာခေါင်းစည်းများ၊လက်အိတ်များထုတ်ပေးထားရှိပြီး ဖုန်မှုန့်များ၊ အနံ့အသက် များအားကာကွယ်ထားရှိစေပါသည်။ EIA (Environmental Impact Assessment), SIA (Social, Impact Assessment), HIA (Health Impact Assessment) တို့နှင့်ပတ်သက်၍ Green Myanmar အဖွဲ့အစည်းထံတွင် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ပြီး
စည်းမျည်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်နေသော စက်ရုံများ ဖြစ်ပါသည်။
ငွေရည်ပုလဲသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီ များညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန မှတ်ပုံတင်အမှတ် (၁၅၅၇၄၃၂၉၈) ဖြင့် (၂၀၀၄ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၂ရက်)နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
Crownဘိလပ်မြေစက်ရုံအတွက်လိုအပ်သောစက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်း(ကျောက်မီး သွေး၊ထုံးကျောက်၊ဂေါဒန်၊သံကြွယ်ဘောက်ဆိုဒ်)တို့ကိုသတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြု မိန့်ရယူပြီးအမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ခွဲဝေသည့်စနစ်ဖြင့် တူးဖော် ထုတ်လုပ်လျှက်ရှိပါသည်။
To be the leading partner in nation-building. Taking part to createabetter life for the citizen of preserving honorable business ethics and practices.
To create value for all customers, employees and other stakeholders through standards of transparency, accountability in manufacturing while fulfilling corporate social responsibility.